လုံခြုံရေးပေးလျှင် CDM ထပ်လုပ်မည့် စစ်သား ၅၀၀ခန့် စာရင်းရှိကြောင်း ပြည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့ ထုတ်ပြော…. – Sport Gaber
လုံခြုံရေးပေးလျှင် CDM ထပ်လုပ်မည့် စစ်သား ၅၀၀ခန့် စာရင်းရှိကြောင်း ပြည်သူ့စစ်သားအဖွဲ့ ထုတ်ပြော….
(INUG)ကသာ လုံခြုံရေးကူညီပေးနိုင်လျှင် တစ်လအတွင်း နောက်ထပ်စစ်သား ၅၀၀ခန့် CDM လုပ်မည့်စာရင်းရှိကြောင်း ပြည်သူ့စစ်သားကဏ္ဍက ယနေ့ရေးသားဖော်ပြသည်။
ပြည်သူ့စစ်သားကဏ္ဍသည် CDM ပြုလုပ်ထားသည့် စစ်တပ်မှ အရာရှိများ၊ စစ်သားများပြုလုပ်ထားပြီး CDM ပြုလုပ်သူ၎င်းတို့အတွက် INUG နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ အကူအညီပေးခြင်းများလုပ်ဆောင်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
စစ်သားအင်အား ၅၀၀ခန့် အရေအတွက်သည် တိုက်ခိုက်ရေးအင်အားအရဆိုလျှင် တပ်ရင်း ၅ရင်းခန့်မျှ ရှိပြီး ပြည်သူနှင့် ပြည်သူ့စစ်သား ပေါင်းစည်းခြင်းသည် သွေးမြေကျမှုအနည်းဆုံးနှင့် အောင်ပွဲရမည့်နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့က ရေးသားဖော်ပြသည်။
အာဏာသိမ်းပြီး ၆ကျော်ကာလအတွင်း အကြမ်းမဖက် လူထုအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM ပြုလုပ်သည့် စစ်သား ၁၅၀၀ခန့်အထိရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းတို့ကို အကူအညီပေးနေသည့် CDM အရာရှိ ဗိုလ်ကြီးလင်းထက်အောင်က Myanmar Now သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားထားသည်။
လုံခြုံရေးအရနှင့် ကိုဗစ်ကြောင့် အပြင်မထွက်နိုင်သေးဘဲ တပ်တွင်းမှာပင်ရှိနေသေးပြီး CDM ပြုလုပ်လိုသည့် စစ်သည်၊ အရာရှိများအနေနှင့် ပြည်သူ့ရင်ခွင့်အဖွဲ့ထံသို့ ဆက်သွယ်၍ INUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အသိအမှတ်ပြု Pre-CDM ကုတ်များရယူနိုင်ကြောင်း ယင်းအဖွဲ့က ကြေညာထားသည်။
လုံခွုံရေးပေးလြှငျ CDM ထပျလုပျမည့ျ စဈသား ၅၀၀ခန့ျ စာရငျးရှိကွောငျး ပွညျသူ့စဈသားအဖှဲ့ ထုတျပွော….
(INUG)ကသာ လုံခွုံရေးကူညီပေးနိုငျလြှငျ တဈလအတှငျး နောကျထပျစဈသား ၅၀၀ခန့ျ CDM လုပျမည့ျစာရငျးရှိကွောငျး ပွညျသူ့စဈသားကဏ်ဍက ယနေ့ရေးသားဖောျပွသညျ။
ပွညျသူ့စဈသားကဏ်ဍသညျ CDM ပွုလုပျထားသည့ျ စဈတပျမှ အရာရှိမြား၊ စဈသားမြားပွုလုပျထားပွီး CDM ပွုလုပျသူ၎င်းငျးတို့အတှကျ INUG နှင့ျ ခြိတျဆကျပေးခွငျး၊ အကူအညီပေးခွငျးမြားလုပျဆောငျနသေည့ျအဖှဲ့ဖွဈသညျ။
စဈသားအငျအား ၅၀၀ခန့ျ အရအေတှကျသညျ တိုကျခိုကျရေးအငျအားအရဆိုလြှငျ တပျရငျး ၅ရငျးခန့ျမြှ ရှိပွီး ပွညျသူနှင့ျ ပွညျသူ့စဈသား ပေါငျးစညျးခွငျးသညျ သှေးမွကေမြှုအနညျးဆုံးနှင့ျ အောငျပှဲရမည့ျနညျးလမျးဖွဈကွောငျး ယငျးအဖှဲ့က ရေးသားဖောျပွသညျ။
အာဏာသိမျးပွီး ၆ကြောျကာလအတှငျး အကွမျးမဖကျ လူထုအာဏာဖီဆနျရေးလှုပျရှားမှု CDM ပွုလုပျသည့ျ စဈသား ၁၅၀၀ခန့ျအထိရှိလာပွီဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးတို့ကို အကူအညီပေးနသေည့ျ CDM အရာရှိ ဗိုလျကွီးလငျးထကျအောငျက Myanmar Now သတငျးဌာနသို့ ပွောကွားထားသညျ။
လုံခွုံရေးအရနှင့ျ ကိုဗဈကွောင့ျ အပွငျမထှကျနိုငျသေးဘဲ တပျတှငျးမှာပငျရှိနသေေးပွီး CDM ပွုလုပျလိုသည့ျ စဈသညျ၊ အရာရှိမြားအနနှေင့ျ ပွညျသူ့ရငျခှင့ျအဖှဲ့ထံသို့ ဆကျသှယျ၍ INUG ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန အသိအမှတျပွု Pre-CDM ကုတျမြားရယူနိုငျကွောငျး ယငျးအဖှဲ့က ကွညောထားသညျ။
ပြောလက်စအဖွဲ့တွေကို ရှိတဲ့ငွေကိစ္စဖြတ်ပြီးရင် လုံးဝရပ်ပြီ ဆက်မလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီဆိုတဲ့ပန်ဆယ်လို